Nekukurumidza kukura kwesainzi uye tekinoroji, zvine hungwaru, zvirinyore uye zvinokurumidza zvigadzirwa zvave zvidikanwi zvakakosha muhupenyu hwevanhu hwezuva nezuva. Alipay uye Wechat Pay vanoita shanduko huru uye vanounza zvirinyore muhupenyu hwezuva nezuva hwevanhu. Parizvino, kubuda kwema smart e-mabhasikoro kuri ...
Muna 2021, Smart e-bikes yave ndiyo "nzira" yemakambani makuru kukwikwidza musika unotevera. Hapana mubvunzo kuti chero munhu anokwanisa kutungamira munzira nyowani yehungwaru anogona kutora kutungamira munharaunda ino yekumisikidza iyo e-bhasikoro indasitiri pateni. smart e-bhasikoro mhinduro Throu ...